2 အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုဆိုဒ်များ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
အလွန်ကြီးစွာသောကမ်းလှမ်းမှုကိုရှာဖွေနေပါသလား ထိပ်တန်းလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ rated ကျွန်တော်တို့ရဲ့ streamers တဦးနှင့်အတူ သွား. , CasinoGrounds နှင့်၎င်း၏အသိုင်းအဝိုင်းမှသီးသန့်ကဤဖြစ်ခြင်းကမ်းလှမ်းမှုအများစု။ ကျနော်တို့နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ကာစီနိုဂိမ်းကိုစမ်းသပ်။ ကျနော်တို့ကာစီနိုဂိမ်းထိုကဲ့သို့သောသော့ခတ်ထုတ်ယူနှင့်အသုံးစရိတ်ကန့်သတ်အဖြစ်တာဝန်ယူလောင်းကစားဝိုင်း features တွေမြှင့်တင်နေတုန်းလုံခြုံလောင်းကစားဝိုင်းပလက်ဖောင်းများကိုမည်သည့် ပို. အရေးကြီးသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားသမားအကြွင်းမဲ့အာဏာအကောင်းဆုံးကြိုဆိုလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေကို ပူဇော်. , မည်သူကိုငါသိ၏။ အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Streamers သူတို့ရဲ့ထိပ်တန်းကာစီနိုဆုကြေးငွေဘို့ကောက်ယူသောကျယ်ပြန့်စမ်းသပ်ပြီးကာစီနိုဂိမ်းစာရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, အသစ်နှင့်ပုံမှန်ကစားသမားနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံများကို။
Vitus Britva ကာစီနိုဆုကြေးငွေ:
အင်္ဂလိပ်ကာစီနိုဆုကြေးငွေ | Arabic အဘိဓါန်ကာစီနိုဆုကြေးငွေ | ဘော့စျနီးယားကာစီနိုဆုကြေးငွေ | ဘူဂေးရီးယားကာစီနိုဆုကြေးငွေ | တရုတ်ကာစီနိုဆုကြေးငွေ | ခကျြခကျြကာစီနိုဆုကြေးငွေ | ဒိန်းမတ်ကာစီနိုဆုကြေးငွေ | ဒတ်ခ်ျကာစီနိုဆုကြေးငွေ | Estonian အဘိဓါန်ကာစီနိုဆုကြေးငွေ | ဖင်လန်ကာစီနိုဆုကြေးငွေ | ပြင်သစ်ကာစီနိုဆုကြေးငွေ | ဂျြောဂြီယနျကာစီနိုဆုကြေးငွေ | ဂျာမန်ကာစီနိုဆုကြေးငွေ | ဂရိကာစီနိုဆုကြေးငွေ | ဥစာကာစီနိုဆုကြေးငွေ | ဟိန်ဒီကာစီနိုဆုကြေးငွေ | လန်ကာစီနိုဆုကြေးငွေ | အင်ဒိုနီးရှားကာစီနိုဆုကြေးငွေ | အိုငျးရစျကာစီနိုဆုကြေးငွေ | အီတလီကာစီနိုဆုကြေးငွေ | ဂျပန်ကာစီနိုဆုကြေးငွေ | ကိုရီးယားကာစီနိုဆုကြေးငွေ | လက်တင်ကာစီနိုဆုကြေးငွေ | အံကာစီနိုဆုကြေးငွေ | မလေးကာစီနိုဆုကြေးငွေ | မောလ်ကာစီနိုဆုကြေးငွေ | လီးကာစီနိုဆုကြေးငွေ | နော်ဝေကာစီနိုဆုကြေးငွေ | ပိုလနျကာစီနိုဆုကြေးငွေ | ပေါ်တူဂီကာစီနိုဆုကြေးငွေ | ရိုမေးနီးယားကာစီနိုဆုကြေးငွေ | ဆားဗီးကာစီနိုဆုကြေးငွေ | စလိုဗကျကာစီနိုဆုကြေးငွေ | စလိုဗေးနီးကာစီနိုဆုကြေးငွေ | ထိုင်းကာစီနိုဆုကြေးငွေ | ဆူဒန်ကာစီနိုဆုကြေးငွေ | တူရကီကာစီနိုဆုကြေးငွေ | ဗီယက်နမ်ကာစီနိုဆုကြေးငွေ
တစ်ဦးကလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေကာစီနိုလောင်းကစားရုံကြောင့်ကစားသမားများနှင့်အတူကစားရန်ပိုပြီးရန်ပုံငွေများပါစေထုတ်ပေးတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဆုကြေးငွေ၏အသုံးအများဆုံးကတော့ဖြစ်ပါတယ် "သိုက်ဆုကြေးငွေ"အစအဖြစ်လူသိများ"ပွဲစဉ်ဆုကြေးငွေ"။ ဒီအမျိုးအစားမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တိုင်းယူရိုငွေ (သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာငွေကြေး) ကစားသူတစ်ဦးသိုက်အဘို့, လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ၏တန်ဖိုးတစ်ခုအချို့သောရာခိုင်နှုန်းတက်နှင့်အတူကကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်, နှင့် player ရဲ့ချိန်ခွင်လျှာကိုထည့်သွင်းပါ။ ဆိုလိုတယ် ကမ်းလှမ်းချက်ကိုတစ် 100% ဘောနပ်စဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ကစားသမားနှစ်ဆသူတို့ရဲ့သိုက်နှင့်အတူစတင်ပါလိမ့်မည်က 200% ဆုကြေးငွေင်လျှင်, သူတို့သည်ဒါအပေါ်သုံးဆနှင့်အတူ၎င်းတို့၏သိုက်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ ဆုကြေးငွေကမ်းလှမ်းမှုကစားသမားများအတွက် play ဖို့ပိုပိုက်ဆံပေးကြောင့်သူတို့ကိုပိုပြီးအချိန် (နှင့်တစ်ဦးကြီးတွေအနိုင်ရရှိ hit ရန်ပိုကြီးအခွင့်အလမ်း) play, ဒါမှမဟုတ်သူတို့သိုက်နှင့်အတူသာကစားမည်ဖြစ်ကြောင်းထက်ပိုမိုမြင့်မားကစားနည်းကစားခွင့်ပြုပါတယ်။ အားလုံးလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေများအတွက်ဘုံမှထွက်လက်ငင်းငွေချေနိုင်ပါလိမ့်နိုင်ဖို့အတွက်ဆုကြေးငွေအကြိမ်လူတယောက်ငွေပမာဏ wagered ပြီလိုသည်။ eg ဆုကြေးငွေလျှင် 40x အာမခံလိုအပ်ချက်သယ်ဆောင်နှင့်ကစားသမားတစ်ဦး€ 50 ဆုကြေးငွေလက်ခံရရှိခဲ့သည်သူတို့ချိန်ခွင်လျှာထွက်လက်ငင်းငွေချေနိုင်မီ, သူတို့က / အလောင်းအစား€ 2000 အာမခံဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အကောင်းဆုံးလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေကပမာဏ, ဒါပေမယ့်လည်းအာမခံလိုအပ်ချက်များကိုမသာမှကြွလာသောအခါအကောင်းတစ်ဦးချိန်ခွင်လျှာဒဏ်ခတ်သောသူတို့ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာလိုအပ်ချက်ကစားသမားကစားရန်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူဆုကြေးငွေကြာလျက်နှင့်မယ့်အခမဲ့ပိုက်ဆံထွက်လက်ငင်းငွေချေရန်သေချာစေရန်လည်းမရှိ။ သိုက်ဆုကြေးငွေ၏အကြွင်းမဲ့အာဏာအများစုက "cashable" ၏ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကျယ်ပြန့်ကိုအကောင်းဆုံးလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေစဉ်းစားနေချိန်တွင်အချို့သောကာစီနိုလောင်းကစားရုံပူဇော်အခြားအမျိုးအစားများရှိပါတယ်။ သိုက်ဆုကြေးငွေ၏မတူညီသောအမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည်:
Cashable လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ၏အသုံးအများဆုံးနဲ့သူတို့ပြောဘာတွေလုပ်နေလဲ; cashable ။ ဆုကြေးငွေများ၏အာမခံလိုအပ်ချက်များကိုမပြည့်စုံပြီပြီးတာနဲ့သိုက်, အနိုင်ရရှိတဲ့နှင့်ဆုကြေးငွေနှစ်ဦးစလုံးမှထွက်လက်ငင်းငွေချေရန်အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။
ကပ်သော အဆိုပါရှုပ်ထွေးသောဆုကြေးငွေအတိအကျ cashable ဆုကြေးငွေများကဲ့သို့မဟုတ်တဦးတည်း key ကိုခြားနားချက်နှင့်အတူဖြစ်ပါသည် - ဆုကြေးငွေကိုယ်တိုင်ကထွက်ငွေကြေးနဲ့ဖုံးလွှမ်းထားပါတယ်မရနိုင်ပါ။ ကစားသမားအာမခံလိုအပ်ချက်များကိုပြည့်ပြီးတာနဲ့သူတို့ကဆုကြေးငွေသူတို့ရဲ့သိုက်နှင့်အနိုင်ရရှိတဲ့အထဲကလက်ငင်းငွေချေရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပေမယ့်ကြသည်မဟုတ်။ တစ်ဦးကကစားသမားတစ်ဦးစေးကပ်ဆုကြေးငွေပါဝငျသောဆုတ်ခွာစေသည်သောအခါ, ဆုကြေးငွေယေဘုယျအားဖြင့်ဆုတ်ခွာပေါင်းလဒ်ကနေနုတ်ယူသည်။
post-အာမခံ post-အာမခံသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေသူတို့ကစားသမားအကြိမ်လူတယောက်ငွေပမာဏကိုသူတို့သိုက် wagered ထားပါတယ်ပြီးမှသာအသိအမှတ်ပြုကြသည်အတွက် cashable နှင့်စေးကပ်ဗားရှင်းအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနား။ ဒါကြောင့်သူတို့လိုခငျြအခါတိုင်း cashout သူတို့ကိုခွင့်ပြုအဖြစ်အခြို့သောကစားသမား (သိုက်အာမခံလိုအပ်ချက်များချည်ထားမပြုလုပ်) ဒီပိုနှစ်သက်ပေမယ့်သူတို့တစ်တွေပိုကြီးချိန်ခွင်လျှာချက်ချင်းသိုက်ပြီးနောက်ကစားခံရဖို့ခွင့်ပြုအဖြစ်အများဆုံးကတော့ cashable ဆုကြေးငွေကြိုက်တတ်တဲ့။
အဆိုပါအဘယ်သူမျှမအပ်ငွေအပိုဆုကြေးငွေသူတို့ကိုလက်ခံရရှိရန်ငွေသွင်းရန်ကစားသမားမလိုအပ်ပါဘူး။ ဤရွေ့ကားအများဆုံးမကြာခဏကစားသမားမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်တစ်သိုက်အောင်ရှေ့တော်၌ထိုလောင်းကစားရုံထွက်ကြိုးစားရန်ခွင့်ပြုပေးထားကြသည်။ no-သိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေနေဆဲအချို့ပိုက်ဆံအနိုင်ရဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခြင်းစဉ်အခါ, လောင်းကစားရုံများအတွက်ခံစားရဖို့အကောင်းတစ်လမ်းဖြစ်၏။ သို့သော်တစ်ဦးသိုက်လိုအပ်မအားလုံးနီးပါးဆုကြေးငွေနှစ်ဦးစလုံးအတော်လေးမြင့်မားသောအာမခံလိုအပ်ချက်များကိုသယ်ဆောင်အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် max ကို cashout ရှိခြင်းသတိပြုပါ Do ဥပမာ - € 50 ယူရို။ သူတို့ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်မတိုင်မီတချို့ကမသိုက်ဆုကြေးငွေလည်းအမှန်တကယ်ပိုက်ဆံသိုက်လိုအပ်သည်။ အမြဲတမ်းလောင်းကစားရုံ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခွအေနမြေားကိုဖတ်ရှုဖို့သေချာအောင်လုပ်ပါ။
100 Rizk ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
150 Insta ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
90 အခမဲ့ AllIrish ကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ spins
Kultakaivos ကာစီနိုမှာ 45 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
70 အခမဲ့ MainStage ကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံ spins
65 အခမဲ့ NoBonus ကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံ spins
135 အခမဲ့ VIPRoom ကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံ spins
135 အခမဲ့အန်နာကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ spins
45 Norskelodd ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
Pokies ကာစီနိုမှာ 145 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
Gossip ကာစီနိုမှာ 50 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
85 Nederbet ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
75 MyJackpot ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
90 ChanceHill ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
25 အခမဲ့မင်္ဂလာပါကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
25 အခမဲ့ TipTop ကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကာစီနိုမှာ 175 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
125 အခမဲ့ချယ်ရီကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံ spins
Dragonara ကာစီနိုမှာ 130 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
30 အခမဲ့ Volt ကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ spins
Suomiarvat ကာစီနိုမှာ 125 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
50 အခမဲ့ BuzzSlots ကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံ spins
1 Vitus Britva ကာစီနိုဆုကြေးငွေ:
2 Ludojop ကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ:
5 အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ codes တွေကိုအဘယ်သူမျှမအပ်ငွေလိုအပ်: